aMule: Kuiswa kweLinux uye gadziriso yekumisikidza | Linux Vakapindwa muropa
aMule: chirongwa chiri mupenyu kwazvo chakasiiwa
aMule chirongwa chinokuyeuchidza yakawanda yeakakurumbira eMule chirongwa chekugovana mafaera. Zvakanaka, aMule zvakare yemahara (pasi peGNU GPL) uye muchinjika-chikuva P2P yekuchinjana chirongwa chine chinongedzo chinotaridzika senge chaiyo dombo reMule. Iyo inoshanda ne eDonkey uye Kademlia network uye inotora kubva kunowanikwa kodhi ye xMule, inova pachayo forogo yeLMule. Iyo yekupedzisira yaive yekutanga kuyedza kuisa iyo eMule mutengi kuGNU / Linux.
Chinangwa chevagadziri vacho kwaive kugadzira iyo eMule multiplatform uye ivo vakabudirira zvechokwadi, sezvo iri inokwanisa kushanda neGNU / Linux, Solaris, Mac OS X, Irix, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, uye Windows, pamwe nekutsigira dzakasiyana siyana zvivakwa senge IA32, AMD64, SPARC, PPC, Xbox, nezvimwe. Uye parizvino pane maBhaibheri maviri eMule aunogona kuwana mumabhuku ewaunofarira ma distros kana pawebhusaiti yepamutemo yeprojekti.
Yokutanga vhezheni ndeyekuvandudza kweSVN uye imwe ndiyo iyo shanduro yakagadzikana. Iyo yekupedzisira ndeyechazvino asi muzviitiko zvakawanda inopa mamwe matambudziko, kunyanya mamwe mabugs ayo anokanganisa iko otomatiki uye kusatarisirwa kuvhara kwekushandisa. Kunyangwe uine script iwe unogona kuimanikidza kuvhura painovhara otomatiki, chokwadi ndechekuti haina kugadzikana uye kuti kupindirana mashandiro kunodzora zvakare kurodha pasi kunomira nguva dzese chirongwa chikavharwa ... Ndosaka zviri nani shandisa yakagadzikana vhezheni.
Kuti uwane rumwe ruzivo iwe unogona kubvunza yako zviri pamutemo webhusaiti, uye nezve musoro wenyaya ino, taura kuti shanduro nyowani hadzichapiwi kubvira 2016 uye chirongwa ichi chinoita kunge chakafa. Asi kunyangwe zvakadaro, ivo varipo vachiri vashoma vashandisi vanoshanda vaneMule uye zvinongedzo zvekugovana zvinoramba zvichishanda. Parizvino pane dzimwe nzira dziri nani dzekugovana, senge saiti senge Mega kana Torrent, asi kunonoka kweMule kunobhadharwa nehuwandu hwemafaira aripo ausingawani nedzimwe nzira.
1 Maitiro ekuisa aMule pane yako kugovera:
2 Kutanga kugadzirisa aMule:
3 Kutanga kurodha pasi:
Maitiro ekuisa aMule pane yako kugovera:
Para gadza aMule pane yako yaunofarira kugovera Unogona kusarudza kushandisa maneja wepakeji uye epamutemo marekodhi e distro yako kuti utore iyo bhaisiketi package uye kuiisa nenzira yakapusa. Dambudziko neizvi nderekuti rinosiyana pakati pekugovera kumwe uye kumwe, saka kuzvitsanangura, ndosaka zviri nani kuti iwe uwane iyo inonakidza Wiki kuti vagadziri veMule vatisiya.
Nekudaro, isu tichaenda kutsanangura nhanho nhanho iyo generic fomu iyo ingave yakakodzera kune chero kugoverwa kubva patinotanga kubva kutarball ine aMule sosi kodhi kuisunungura uye kuumbiridza mune yedu system. Kune izvi, zvinodikanwa kuti tione kuti tinozadzisa zvakateedzana zvezvinodiwa, nekuti kuunganidzwa kunoda mapakeji mazhinji ayo anoenderana. Saka chinhu chekutanga ndeche gutsa kutsamira.
Yekutanga kutora uye kuumbiridza wxWidgets chii chaungaite kurodha pasi kubva pane iyi link uye gare gare:
Nenzira, zvingave zvinokurudzirwa kuti uzviite neGUI yakaremara uchishandisa iyo –inogoneka-gui sarudzo kana kuzviita kubva kune tty. Kana iwe ukatibvunza isu imwe pasuru iyo zvinoenderana nazvo, isu tinofanirwa zvakare kuiisa, nekuti zvinoenderana neshanduro kana iyo distro inogona kusiyana.
Kana tangova nazvo tinoenda nyora aMule, kurodha tarball kubva pano uye kana tangova nayo munharaunda:
Rangarira kutsiva iyo XXX ine zita kana vhezheni yesosi yepakeji iwe yawakadhirodha iwe.
Kutanga kugadzirisa aMule:
Zvino tinogona mhanya aMule uye tanga nekugadzirisa, nekuti izvi tinogona kuzviita kubva pakoni:
Kana tichivhura kekutanga tinogona kuona kumusoro kwese mifananidzo nesarudzo dzakasiyana dzaunogona kuwana:
Batanidza disconnect: Ndiro bhatani ratinogona kubatana naro kuseva kutanga kurodha pasi nekutsvaga, nekuti isu tinofanirwa kuve takabatana kune imwe yeizvi. Tevere tichaona maitiro ekuwedzera maseva akavimbika uye nekubatanidza ...
Nets: pano isu tinogona kuona iyo runyorwa rweanowanikwa maseva uye yavo chimiro, pamwe nerogi nezve kubatana kwatakatanga.
kutsvaka: muchikamu chino tinogona kutsvaga nemitsara kana mazwi ezvo zvinhu zvatinoda kurodha pasi. Isu tichawana zvakare maturusi ekusefa nefaira saizi, mhando, nezvimwe, kuti tiite tsvakiridzo chaidzo. Kunyangwe tikada kuitsvaga pasirese kana munzvimbo medu.
Traffic: iri mune iyo tebhu iyo yatinoona munguva chaiyo kuti kurodha pasi kunoitika sei, ichipa ruzivo nezve zvinobatana, iyo pesenti yakadzingwa uye inguva yakatarwa yekupedzisa kurodha pasi, pamwe nerumwe ruzivo. Kubva pano isu tinokwanisa zvakare kushandura izvo zvekutanga nekudzvanya nekona kiyi bhatani pane iyo rodha pasi faira, tora ruzivo, riibvise, riimise, tangazve, nezvimwe.
Yakagovaniswa mafaera: Ndiwo mafaera atiri kugovana, ndiko kuti, panguva yatinobatana, mafaira ari mu ~ / .aMule / dhairekitori rinouya rinozogoveranwa nevamwe vese vashandisi venetiweki.
Mirayiridzo: tinogona kushandisa iyi chat kuti tibate vamwe vashandisi vakabatana kunetiweki, kunyangwe chokwadi chisingashandiswe zvakanyanya.
Statistics: iwe unogona kudzidza manhamba kuti uone izvo zvarodhaunirwa, kushandiswa kwemambure, nezvimwe
mikana: Ndiyo yakakosha sarudzo yekumisikidza menyu, kunyangwe musimboti ini handikurudzire kuti ubate chero chinhu nekuti iyo yekumisikidza yekugadzirisa inokurudzirwa. Muchokwadi, iwo chete akakosha marongero aunofanirwa kutarisa pane iwo mabhenji ekuDhawunirodha nekuRodha, ayo iwe aunofanirwa kumisikidza ku80% mune iyo yeKuteedzera kuti irege kudzora kudhanilodha.
pamusoro- Inoratidza yekuvandudza uye vhezheni ruzivo.
Kana tangoziva iyo graphical interface, isu tinoenderera mberi kunzira yekutora.
Kutanga kurodha pasi:
Chinhu chekutanga chatichada kurodha pasi kuwedzera mamwe akavimbika uye akachengeteka masevaNezve izvo isu tinogona kushandisa iwo akafanana neayo eMule, nekuti iwo anowirirana zvizere. Unogona kuenda kuneti Networks uye kubva ipapo isa iyi link kuti uiwedzere:
Kana iyo link ikasashanda kwauri, unogona kusarudza pinda ichi chimwe, kubva mairi kurodha pasi .txt faira ine iyi link. Ini handikupi zano iwe kuti utarise mamwe maseva nekuti anogona kunge asina kuchengetedzeka, kunze kwekunge iwe ukavawana pane yepamutemo eMule peji, mune iyo mamiriro iwe unogona kuvimba navo.
Kana runyorwa rwemaseva rangooneka tinogona kudzvanya pane imwe kuti tibatanidze uye mushure mekubatanidza tinogona kuenda kutsvagisa tebhu ku tsvaga iyo faira ratiri kuda kurodha pasi, uye nekudzvanya zvakapetwa kaviri zvichawedzerwa kunzvimbo yeTraffic, saka unenge uchirodha pasi.
Usakanganwa kusiya kusahadzika kwako uye inotsanangura...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » aMule: chirongwa chiri mupenyu kwazvo chakasiiwa
Chinyorwa chikuru uye chakanyatsotsanangurwa Isaac, Rarama hupenyuMure! : D
Pindura kuna elcondonrotodegnu
Chinyorwa chakanaka sei. Inguvai dzaive idzo apo maMule neMule vaive chimurenga chekurodha pasi, pakukwira kwekutsakatika Megaupload. Ndakanga ndine retro nguva yakanditorera makore kumashure munguva. Chokwadi ndechekuti nhasi uno chishandiso chinogona kunge chiri chakabudirira kupfuura zvese maererano neP2P kana chikatorwa zvakanyanya, zvinongoda kuziviswa nekuti sekurangarira kwandinoita kana mafomu akaita seBitTorrent aMule akabuda aingove akakwirira asi vanhu vaingoshandisa izvo zvirinyore kuziva kuti panguva iyoyo yaive BitTorrent uye nezvimwe.
Mhoro munhu wese, iyo posvo inonakidza kwazvo. Rimwe zuva ndakaverenga chinyorwa nezve zvangu bitcoins uye ndinofunga inogona kuve nzira yakanaka yekudyara mune ramangwana. Pane mumwe akaedza here? Iwe uchandiudza zvaunofunga! Kwazisai ndokuonai munguva pfupi.
Marga Lopez akadaro
Ini ndaisa iyo ubuntu 18.04 vhezheni uye amule yamira kundishandira. Pandinotsvaga, chirongwa chinovhara pasina kupa sarudzo. Chii chandingaite << '
Pindura Marga López
Iwe uchagadzirisa rini iro dambudziko rinovhara kana uchitsvaga? sezvo ini ndakaita iko kukanganisa kukuru kwekuisa ubuntu 18.04 ndakapera amule.
chii chingaitwe? nekuti sezvavasingaigadzirise munguva pfupi ndichafanira kuonekana neUbuntu.
electro goblin akadaro
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri sekuna Manolo, sezvo ini ndachinja kuita 18.04, inovhara kana uchitsvaga
Pindura kune Electroduende
David mateu akadaro
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, amule inovharwa chete kana ndikaipa kuti ndiitsvage.
Izvo zvisati zvaitika chete pandakavhara iyo yekutsvaga tebhu.
Wati wawana chero mhinduro?
Pindura kuna David Mateu
Hapana chakagadziriswa parizvino?
Mu kde neon uye ubuntu 19.04 inovharawo pachayo.
gadza vhezheni 2.3.2 iri muDebian buster repos (yakasimba)
Pindura kuna devuanitaferoz
Shandisa Devuan 3 / Debian10
zvirinani kuiisa kubva kune repos repamutemo
sudo apt-tora kuisa amule
Kuti ubatanidze kune ED2K network kana ikasazviita zvoga, unofanira kunyora
mubhokisi re «ED2K maseva» uye tinya batanidza
kana kuwedzera maseva nemaoko rimwe nerimwe kubva
Kuti ubatanidze netiweki yeKad unofanira kutora faira inonzi "nodes.dat" kubva
uye teedzera iyo kune yako amule yekugadzirisa dhairekitori, kazhinji ~ / .aMule
neimwe nzira ona:
kuti uwane rumwe ruzivo ona iyo wiki
Vakazvigadzira zvinouraya. Usati watumira chero chinhu iwe unofanirwa kuzviedza. Ini ndaisatombovatsvaga seva programmers.
Hapana chinowoneka pamaitiro ekugadzirisa sarudzo kuti uwedzere kuita.
Unogona here kusiya chinongedzo kwandinogona kuzviita nhanho nhanho?
Sevha nzvimbo pane yako diski uye shandisa yako Steam mitambo mune mbiri bhutsu
Mhinduro kuMvumo yakaramba dambudziko E: [pulseaudio] main.c: